Dhageyso: Xaamud “ Madaxweyne Waxaan ku balan qaadaya inad Booliiska ka heleyso Cod Maadaama 3 Nin oo booliiska ka tirsan ay ku soo baxeeen labada Aqal”. – idalenews.com
Dhageyso: Xaamud “ Madaxweyne Waxaan ku balan qaadaya inad Booliiska ka heleyso Cod Maadaama 3 Nin oo booliiska ka tirsan ay ku soo baxeeen labada Aqal”.
Muqdisho(INO)- Taliyaha ciidamada Booliska Soomaaliya S/Gaas Max’ed Sheikh Xasan Xaamud ayaa war wanaagsan dhegta ugu sheegay Xasan Sheikh Maxamuud oo ah musharax u taagan xilka madaxtinimo ee Somalia.
Generaal Xaamud ayaa u sheegay Xasan Sheikh inuu ku tashto codka seddex Sarkaal Boolis oo hada ka mid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ee dhawaan la soo doortay.
Seddex Sarkaal ayuu tilmaamay S/Gaas Max’ed Sheikh Xasan Xaamud iney codka ugu shubi doonaan doorashada madaxtinimo musharax Xasan Sheikh Maxamuud,isagoo ku laab qaboojiyay inuu ku tasho codka seddexdaasi sarkaal Boolis.
Hadalkaan ayuu Taliyaha Ciidamada Booliska ka hor sheegay Xasan Sheikh oo shalay ka qeyb galayay munaasabada 73-aad guuradii ka soo wareegtay markii la aas-aasay Ciidamada Booliska Somalia sanadkii 1943-kii.
Dadka siyaasadda indha indhaeeya ayaa arintaan ku tilmaamay mid Generaal Xaamud uu ku sii dheereysanayo Xilka uu Qaranka u hayo.
Kooxda ISIS oo sheegatay masuuliyadda weerarkii magaalada Berlin ee dalka Jarmalka
Dhageyso: Rag Loo Tababarey Daaweynta CXS Oo Tababar Looga Soo Xirey Baydhabo